မွေးနေ့မှာ တောထဲကညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ထမင်းမြိန်အောင် အမှတ်တရအလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟန်နာယူရီ – Shwe Yaung Media
မွေးနေ့မှာ တောထဲကညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ထမင်းမြိန်အောင် အမှတ်တရအလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟန်နာယူရီ
Beauty Blogger တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဟန်နာယူရီကတော့ ကိုရီးယားမလေးတစ်ယောက်လို ချစ်စရာကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်နာယူရီကတော့ လက်ရှိမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပဲ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အလှူငွေကောက်ပေးခြင်း Speak Out လုပ်ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က နိုဝင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ကတော့ ဟန်နာယူရီရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး ဟန်နာယူရီက သူမရဲ့မွေးနေ့မှာ တောထဲကညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း “Happy Birthday to me!
ဒီလိုအချိန်ပျော်စရာBirthdayလို့တော့ ပြောမထွက်ရက်ပါ။ ဒီနှစ်မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ လေးစားရတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအတွက် ဝက်သားဟင်းနဲ့ ရယ်ငပိရည်ပဲဟင်းရယ် ထမင်းစားမှိန်အောင်လှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်” ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်။
ဟန်နာယူရီကတော့ မွေးနေ့မွေးလမွေးရက်အကုန်တိုက်တဲ့ရက်မှာ မှတ်မှတ်ရရနဲ့ တကယ်လိုအပ်တဲ့ တောထဲကရဲဘော်တွေကို ထမင်းတစ်နပ်စာလှူဒါန်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးနေ့ရှင်လေး ဒီထက်မက စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရပါစေနော်။
Source: Hannayuri’s fb
ေမြးေန႔မွာ ေတာထဲကညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ ထမင္းၿမိန္ေအာင္ အမွတ္တရအလႉလုပ္ခဲ့တဲ့ ဟန္နာယူရီ
Beauty Blogger တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သလို သ႐ုပ္ေဆာင္ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့ ဟန္နာယူရီကေတာ့ ကိုရီးယားမေလးတစ္ေယာက္လို ခ်စ္စရာေကာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဟန္နာယူရီကေတာ့ လက္ရွိမွာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာပဲ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အလႉေငြေကာက္ေပးျခင္း Speak Out လုပ္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
မေန႔က ႏိုဝင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔ကေတာ့ ဟန္နာယူရီရဲ႕ေမြးေန႔ေလးျဖစ္ၿပီး ဟန္နာယူရီက သူမရဲ႕ေမြးေန႔မွာ ေတာထဲကညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ အလႉေလးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း “Happy Birthday to me! ဒီႏွစ္ေမြးေန႔ကေမြးလေမြးရက္အကုန္တိုက္တဲ့ႏွစ္ပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္ေပ်ာ္စရာBirthdayလို႔ေတာ့ ေျပာမထြက္ရက္ပါ။ ဒီႏွစ္ေမြးေန႔အမွတ္တရအေနနဲ႔ ေလးစားရတဲ့ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ဝက္သားဟင္းနဲ႔ ရယ္ငပိရည္ပဲဟင္းရယ္ ထမင္းစားမွိန္ေအာင္လႉဒါန္းျဖစ္ပါတယ္” ဆိုၿပီးေျပာလာပါတယ္။
ဟန္နာယူရီကေတာ့ ေမြးေန႔ေမြးလေမြးရက္အကုန္တိုက္တဲ့ရက္မွာ မွတ္မွတ္ရရနဲ႔ တကယ္လိုအပ္တဲ့ ေတာထဲကရဲေဘာ္ေတြကို ထမင္းတစ္နပ္စာလႉဒါန္းေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးေန႔ရွင္ေလး ဒီထက္မက စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ရပါေစေနာ္။
လူငယ်တွေဟာ ပေကပ်ကပ်အတန်းအစားမဟုတ်တာတောင် ပြေပြေလည်လည်မပြောတဲ့ Myanmar Plaza အကြောင်းပြောလာတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ